siteadmin, Author at khabarbox.com.np - Page2of 74khabarbox.com.np
प्रदेश स्तरिय अस्पताल – बज्रवाराही चापागाँउ अस्पताल
Posted 4:14 am by siteadmin & filed under सामाजिक, स्वास्थ्य.
२ असार ०७७, हेटौडा । ललितपुरको केन्द्र चापागाँउको बज्रवाराही चापागाँउ अस्पताललाई प्रदेशस्तरिय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने घोषणा गरिएको छ । वागमती प्रदेश सरकारले सोमबार वजेट वतव्यमार्फत प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले यो अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालको रुपमा विकाश गर्ने कार्ययोजना ल्याउनु भएको हो । सरकारले केही समय अधि जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापना गरिएको बज्रवाराही… Read more »
Posted 11:44 am by siteadmin & filed under सामाजिक, स्वास्थ्य.
Posted 10:56 am by siteadmin & filed under प्रौद्योगिकी, शिक्षा.
Posted 4:08 am by siteadmin & filed under सामाजिक, स्वास्थ्य.
Posted 2:57 pm by siteadmin & filed under बिज्ञान, राष्ट्रीय समाचार.
भारतीय ह्याकरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)को वेबसाइट ह्याक गरेको छ। ‘घोष्ट०५७_५पि३सी७०६’ नामको ह्याकरले साइट ह्याक गरी भारतीय झन्डा राखेको छ। ह्याकरले ‘हामी शान्त छौ त्यसको मतलब केही गर्न सक्दैनौ भन्ने होइन’ भन्ने सन्देस छोडेको छ। ह्याकरले ट्विटरमार्फत् ह्याक गरेको सूचना पोष्ट गरेको ४५ मिनेटभित्रै साइट ह्याकर पहुँच बाहिर आइसकेको थियो। तर फेरि अहिले ह्याकरको पहुँचमा… Read more »
Posted 1:51 pm by siteadmin & filed under सामाजिक, स्वास्थ्य.
Posted 9:44 am by siteadmin & filed under सामाजिक, स्वास्थ्य.
Posted 4:04 am by siteadmin & filed under सामाजिक.